पोस्ट-कोविड युगमा छुट्टी मार्केटिंगमा रणनीति र चुनौतीहरू जानुहोस् Martech Zone
बर्षको विशेष समय कुनाको वरिपरि हुन्छ, हामी सबै आफ्ना प्रियजनहरूसँग अनावश्यक पर्खिरहेका छौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा छुट्टी किनमेलको थुप्रोमा लाग्छ। यद्यपि सामान्य बिदाको विपरित, यस वर्ष COVID-19 द्वारा व्यापक अवरोधका कारण अलग खडा छ।
जबकि विश्व अझै पनि यस अनिश्चिततासँग डट्न संघर्ष गरिरहेको छ र सामान्य अवस्थातिर फर्कँदै छ, धेरै छुट्टि परम्पराले पनि परिवर्तन देख्दछ र यस बर्ष फरक देखिन सक्छ किनकि यी छुट्टिहरू मनाउने डिजिटल पक्षले एक नयाँ चरित्रलाई अँगालेको छ।
विश्वभरि ठूला छुट्टिहरू
स्रोत: MoEngage हलिडे मार्केटिंग गाइड
२०२० मा छुट्टी मार्केटि Chal चुनौतीहरू
२०१ 2018 मा, रिटेल र ई-वाणिज्यको लागि छुट्टीको मौसम बिक्रीले पार गर्यो ट्रिलियन डलर पहिलो पटक मार्क गर्नुहोस्। यद्यपि यस वर्ष बिक्री ढिलो हुन सक्छ तर सही रणनीति र च्यानलहरू भएकोले ब्रान्डले डिजिटल च्यानलहरूको माध्यमबाट उत्पादनहरू धक्का दिन मद्दत गर्दछ।
अमेरिका र युरोपमा हुँदा - ब्ल्याक फ्राइडे, साइबर सोमबार, र क्रिसमस र नयाँ वर्ष बिक्री व्यापक रूपमा लोकप्रिय छन्; दक्षिण पूर्व एशिया र भारतमा - दिवाली, ११:११ [एकल दिवस बिक्री] (नोभेम्बर), हरबोलनास (डिसेम्बर), र ब्ल्याक फ्राइडेले उपभोक्ताहरूलाई हावी बनायो।
उपभोग ढाँचा, प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू र उपभोक्ताहरूको समग्र खरीद शक्तिमा परिवर्तनको साथ, ब्रान्डहरूले नयाँ आवश्यकताहरू पूरा गर्न आफ्नो छुट्टी मार्केटिंग रणनीतिहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। यहाँ महामारीका कारण केहि चुनौतिहरू छन् जुन हलिडे मार्केटि ofमा सजिलो हुन सक्छ।
खरीददारहरू अधिक मूल्य-सचेत छन्: उपभोक्ताहरू विशेष गरी सहस्राब्दीहरूले उनीहरूको खर्च गर्ने बानी परिवर्तन गरेका छन् र स्वाइपरबाट सेभरमा गएका छन्। उपभोक्ताहरू अधिक मूल्य-सचेत र शपि while्ग गर्दा कम आवेगपूर्ण हुनेछन्।
आपूर्ति श्रृंखला वितरण मुद्दाहरू: विश्वभर मा लकडाउन र आन्दोलन प्रतिबन्धको साथ, खुद्रा उद्योगहरूको लागि रसद कठिन पारेको छ। अप्रिलमा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा खुद्रा बिक्री १ chain..16.4% by ले घटेको छ किनभने आपूर्ति श्रृंखला मुद्दाहरूको कारण। श्रम अभाव, यातायात प्रतिबन्ध, र सीमा क्लोजर जस्ता समस्याहरू लामो समयसम्म वितरणको दुर्दशामा थपिएका छन।
स्टोरमा किनमेल गर्न अनिच्छा: व्यक्ति सतर्क भईरहेको छ र स्टोरमा जानको लागि अत्यन्त विशेष हो। डिजिटल र अनलाइन शपिंगले गति लिईयो। ब्रान्डले पनि यो प्रवृत्तिलाई मान्यता दिइरहेको छ र अनलाइन शपिंगका लागि उपभोक्ताहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै भारी छुटहरू प्रदान गर्दैछ।
पछाडि हलिडे रणनीतिहरू
छुट्टिहरु प्राय भावनाहरु र मानवीय कनेक्शन को वरिपरि घुमाउँछन्। ब्रान्डहरूले उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरूमा हुक गराउनको लागि उनीहरूको सञ्चार रणनीतिहरूमा त्यो थप zing थप्नु पर्छ। एक अनुसार विज्ञापन मा युनाइटेड किंगडम-आधारित व्यवसायीको अध्ययन, भावनात्मक सामग्रीका साथ अभियान दुई पटक प्रदर्शन गरियो साथै ती मात्र तर्कसंगत सामग्रीको साथ (%१% बनाम १ 31%)। बजारका रूपमा तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईका अभियानहरू आनन्द, एकता र उत्सवहरूमा केन्द्रित छन्। यहाँ ब्रान्डले अपनाउनका लागि केहि रणनीतिहरू छन्:
कर्बसाइड पिक-अपको बढेको प्रासंगिकता: सम्पर्क रहित वितरण कुञ्जी हो; ग्राहकहरू ब्रान्डको प्रतीक्षा गर्दछन जसले अधिकतम सुरक्षा उपायहरू लिन्छन् जसले अन्ततः ट्रस्ट पनि बनाउँदछ। इनबोर्स भीड र कुर्ने लाइनहरू जोगाउन कर्ब साइड पिक-अपहरू यस छुट्टीको मौसममा ठूलो हुनेछ।
मोबाइल मार्केटिंगमा फोकस गर्नुहोस् - अनुसार एडोबको २०१ H हलिडे रिक्याप, संयुक्त राज्य अमेरिकामा छुट्टीको मौसममाe2019% ई-वाणिज्य वृद्धि स्मार्टफोनको माध्यमबाट गरिएको थियो। फोकस गरिएको लक्ष्यीकरण र स्थान आधारित प्रस्तावहरूले ब्रान्डको स the्लग्नता र अन्ततः बिक्री बढाउन सक्दछ।
समानुभूति संचार: यो एक brainer हो र निश्चित गर्नै पर्छ। ब्रान्डले भावनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न र इन-फेस-मार्केटिंगबाट जोगिन र सन्देशको साथ सूक्ष्म हुनु आवश्यक छ। उनीहरूले यो कठिन समयमा उपभोक्ताहरूसँग एकजुट हुनु आवश्यक छ।
Digitization मा फोकस: डिजिटल च्यानलहरू अपनाउनु विक्रेताको लागि स्पष्ट विकल्प हो। फेब्रुअरीमा पूर्व-महामारीको तुलनामा जूनमा अनलाइन खुद्रा बिक्री अधिक थियो।
अनुकूलित पुश सूचनाहरूको साथ अधिक प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्नुहोस्: औसत प्रयोगकर्ताले एक दिनमा 65 XNUMX भन्दा बढी सूचनाहरू प्राप्त गर्दछ! ब्रान्डले यसको लडाईं गर्नुपर्नेछ र उनीहरूको पुश सूचना खेल। तपाईको सूचनाहरू सूचना ट्रेमा हराउन नदिनुहोस्, धनी र निजीकृत सूचनाहरूको साथ खडा हुनुहोस् जुन याद गर्न गाह्रो छ।
अग्रिम रूपमा मोबाइल मार्केटि strategy रणनीतिलाई अप्टिमाइजेसन र एक सर्वपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउँदा उपभोक्ताहरूलाई ठूलो छुट र मूल्यहरू प्रदान गर्नका साथै सment्ख्यामा अधिकतम मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। अनुकूलन र निजीकरण ठूलो यस छुट्टी को मौसम जीत हुनेछ। छुट्टी जयकार गरौं!
MoEngage हलिडे मार्केटिंग गाइड डाउनलोड गर्नुहोस्
टैग: 11: 11क्रिसमसकोविड - १।कर्बसाइड पिक-अपडिजिटलीकरणविश्व भूगोलhabolnasछुट्टी मार्केटिंग गाइडछुट्टीको मौसममोबाइल मार्केटिङमोबाइल बजार रणनीतिमोन्गेजपोस्ट कोविडसूचनाहरू धक्का दिनुहोस्खुद्रादक्षिण पूर्व एशिया बिदा